इटालीमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ६ हजार ७७ जना पुग्यो ! विश्वभर कुन देशमा कतिले ज्यान गुमाए [सूचीसहित] – Sagarmatha Online News Portal
इटालीमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ६ हजार ७७ जना पुग्यो ! विश्वभर कुन देशमा कतिले ज्यान गुमाए [सूचीसहित]
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको हालको इपिसेन्टरका रुपमा रहेको इटालीमा अवस्था सुधार हुने संकेत देखिएको छैन ।
इटालीमा कोभिड-१९ का कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या लगतार बढिरहेको छ । सोमबार पनि थप ६ सय भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । सोमबार एकै दिन ६ सय २ जनाको मृत्यु भएसँगै इटालीमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमानेको संख्या ६ हजार ७७ जना पुगेको छ ।
यस्तै इटालीमा संक्रमितको संख्या ६३ हजार ९ सय २७ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ४ हजार ७ सय ८९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । इटालीमा गएको शनिबार एकै दिन ७ सय ९३ जनाको मृत्यु भएको थियो । तर आइतबार र सोमबार भने त्यो भन्दा केही कमको मृत्यु भएको हो ।
पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अमेरिकामा तीव्र गतिमा बिस्तार भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार भन्दा बढीमा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएसँगै अमेरिकामा संक्रमितको संख्या कम्तिमा ४३ हजार ७ सय ३४ पुगेको छ । यस्तै थप १ सय ४० जनाको मृत्यु भएसँगै अमेरिकामा कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ५ सय ५३ पुगेको छ ।
स्पेनमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा बिस्तार भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप ६ हजार ३ सय ६८ जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको स्पनेमा कुल संक्रमितको संख्या ३५ हजार नाघेको छ । थप ४ हजार १ सय ८३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जर्मनीमा कुल संक्रमितको संख्या २९ हजार ५६ पुगेको जनाइएको छ ।
स्पेनमा पछिल्लो २४ घण्टामा इटालीपछि सबैभन्दा धेरै ५ सय ३९ जनाको मृत्यु भएको छ । स्पेनमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या २ हजार ३ सय ११ पुगेको छ । यस्तै २३ हजार ४९ कुल संक्रमित रहेको इरानमा मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ८ सय १२ पुगेको छ ।
विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण संक्रमित हुनेको संख्या ३ लाख ७८ हजार ८ सय ४८ पुगेको छ । विश्वभर अहिलेसम्म १६ हजार ५ सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै १ लाख २ हजार ६९ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
विश्वभर कोरोना संक्रमितको मृत्यु र देशको र देशको नाम हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।